Better World Ed: शब्दविहीन भिडियो र कथाहरूले शिक्षालाई मानव बनाउँछ
प्रेस र मिडिया सुविधाहरू
विश्वव्यापी कथाहरू ब्राउज गर्नुहोस्
पैसा र स्टक दान गर्नुहोस्
एउटा उपहार कार्ड दिनुहोस्
आरामदायी गियर पाउनुहोस्
मानवता, सम्बन्धित, समावेश र इक्विटी
पृथ्वी, वातावरण र मौसम
चेतना, आध्यात्मिकता र धर्म
शिक्षण, सिकाई र अनरलिनिंग
समझ, संचार र सहयोग
विविध दृष्टिकोण र जीवन को तरिका को कदर
दिमागमा प्रतिबिम्बित गर्दै
परिप्रेक्ष्य लिने र ग्लोबल जागरूकता
सहानुभूति, बुझ्ने र सुन्ने
अन्यको लागि सम्मान र चरित्र विकास
सिकाइलाई मानवीकरण गर्नुहोस् Better World Ed
वास्तविक जीवन गणित, साक्षरता, समानुभूति, विश्वव्यापी जागरूकता, जिज्ञासा, र सम्बन्धित सिकाउनुहोस्। सबै 150+ राम्रो विश्व कथाहरू मार्फत।
सिकाइमा वास्तविक जीवन ल्याउनुहोस्
हामी शिक्षालाई मानवीकरण गर्ने मिशनमा गैर नाफामुखी हौं।
हामी राम्रो संसारको लागि वास्तविक जीवन कथाहरू सिर्जना गर्छौं।
निर्णय भन्दा बाहिर जिज्ञासा सिकाउनुहोस्। शब्दहरू भन्दा बाहिरको आश्चर्य। विश्वव्यापी रूपमा अनुकूलनीय। विश्वव्यापी रूपमा समावेशी।
गणित र साक्षरता सान्दर्भिक बनाउनुहोस्। मानवीय कथाहरूले समानुभूति र शिक्षाविदहरू बुन्छन्।
पालनपोषण जडान र सम्बन्धित। उद्देश्य र अर्थ। रचनात्मकता र सहकार्य।
Better World Ed युवालाई सहयोग गर्छ
हाम्रो बारेमा सिक्न मन पर्छselभेस,
एक अर्का, र हाम्रो संसार।
गणित र साक्षरता लागू गर्नुहोस्
वास्तविक जीवनमा, सान्दर्भिक तरिकामा।
सहानुभूति र करुणा बढाउनुहोस्
विभाजन पुल र स्वामित्व निर्माण गर्न।
को कपडा पुन: बुन्नुहोस्
हाम्रो साझा मानवता।
शिक्षालाई मानव बनाउनुहोस्।
विद्यालयमा, गृहस्कूलमा, र जीवनमा।
20 लिखित कथाहरू र 20 पाठ योजनाहरू पहुँच गर्नुहोस् जुन धेरै ग्लोबल शब्दविहीन भिडियोहरूसँग जोडिन्छ!
कथाहरू बुकमार्क गर्नुहोस् र आफ्नै प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्!
प्रति वर्ष प्रति शिक्षक
(प्रति महिना, वार्षिक बिल)
$42.00 प्रति सदस्य / वर्ष
अधिक प्रयोगकर्ताहरू, कम लागत
विद्यालय / शिक्षक / अभिभावकको नाम
समीक्षा र चेकआउट
Carefully० ध्यानपूर्वक चयन गरिएका लिखित कथाहरू र Less० पाठ योजनाहरू पहुँच गर्नुहोस् जुन हाम्रो अनौंठो ग्लोबल वर्डलेस भिडियोहरूको साथ जोडी छ!
$72.00 प्रति सदस्य / वर्ष
50 देशहरूबाट सबै 150+ शब्दविहीन भिडियोहरू, 150+ लिखित कथाहरू, र 14+ पाठ योजनाहरू पहुँच गर्नुहोस्!
सबै आगामी र भविष्यको सिक्ने यात्रा र इकाईहरूमा पहुँच गर्नुहोस्!
हाम्रो सबै कथाहरूमा अनुकूल बनाउन डिजाइन गरिएको अनौंठो पाठ योजनाहरू पहुँच गर्नुहोस्!
व्यापक र गहिरो सामग्री विविधता!
उत्तम खोज र ब्राउज अनुभव!
कथाहरू बुकमार्क गर्नुहोस् र अनुकूलन प्लेलिस्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्!
$100.00 प्रति सदस्य / वर्ष
गणित हेर्नको लागि नयाँ लेन्सको अनुभव लिनुहोस्,
साक्षरता, एकअर्का, र हाम्रो संसार।
हाम्रो साझा मानवता हेर्नको लागि नयाँ लेन्स।
इन्स्पायर वन्डर बियन्ड वर्ड्स विथ Better World Ed
कोड प्रयोग गर्नुहोस् BETTERWORLD जीवनको लागि 40% छुटको लागि चेकआउटमा — तपाईंको लागि वा उत्तम रूपमा उपहार!
भाषा समावेशी भिडियोहरू। शब्दहरू भन्दा बाहिरको आश्चर्यलाई प्रेरित गर्नुहोस्। विश्वव्यापी रूपमा अनुकूलनीय।
संसारभरका मानिसहरूको बारेमा वास्तविक कथाहरू। सांस्कृतिक रूपमा समावेशी।
"यो संसारमा कसरी फरक छ?" को जवाफ दिनुहोस्। प्रामाणिक शिक्षाविदहरू।
पूर्वाग्रहमा काम गर्नुहोस्
पूर्वाग्रहहरू र चुनौती धारणाहरूको सामना गर्नुहोस् एक साथ.
वास्तविक जीवन शिक्षा
गणित, साक्षरता, समानुभूति र विश्वव्यापी चेतनालाई सँगै बुन्नुहोस्।
सम्बन्ध निर्माण गर्नुहोस्
समानुभूति र जडान निर्माण गर्दा विभाजनलाई पुल गर्ने कथाहरू।
मानवीय, सान्दर्भिक, सान्दर्भिक तरिकामा आवश्यक विश्वव्यापी विषयहरू अन्वेषण गर्नुहोस्।
शिक्षार्थीहरूलाई हुक गर्नुहोस् र वास्तविक जीवन मानव कथाहरूको साथ आलोचनात्मक सोच्नुहोस्।
"को सौन्दर्य Better World Ed शब्दविहीन भिडियोहरू र कथाहरूलाई हाम्रो अवस्थित पाठ्यक्रममा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। यो सिकाउन को लागी एक अतिरिक्त "चीज" होइन। Better World Ed हामी कसरी हाम्रा सबै शिक्षार्थीहरूको वर्तमान पाठ्यक्रम मार्फत संसारलाई संलग्न गराउन र प्रभाव पार्ने क्षमता निर्माण गर्छौं।
थप प्रशंसापत्रहरू हेर्नुहोस्
राम्रो संसारको लागि शब्दहीन भिडियोहरू र मानव कथाहरू ब्राउज गर्नुहोस्, खोज्नुहोस् र फिल्टर गर्नुहोस्
राम्रो संसारको लागि शब्दहीन भिडियोहरू र मानव कथाहरू।
विश्वव्यापी रूपमा अनुकूलनीय, सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक, र भाषा समावेशी।
अनुकूलन प्लेलिस्टहरूको साथ तपाईंको राम्रो विश्व सिक्ने यात्रा डिजाइन गर्नुहोस्।
150+ मानवीय कथाहरू ब्राउज गर्नुहोस्
दुई कथाहरू निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस्!
राम्रो विश्व पाठ डेमो
थप पोडकास्ट र सुविधाहरू
हामी आजीवन सिकाउनेहरू, शिक्षकहरू र अझ राम्रो विश्व कथाकारहरू हौं जुन हामी बच्चाको रूपमा भएको चाहन्छौं मानवीय सामग्री सिर्जना गर्दछौं।
किन? बिना न्याय गर्नु अघि जिज्ञासा, हाम्रो क्षमता एक अर्कालाई अद्वितीय, सम्पूर्ण, सुन्दर मानिसको रूपमा हेर्नको लागि जटिल हुन्छ।
यसले हामी भित्र र बिचमा गाँठो निम्त्याउँछ।
गाँठहरू जसले हामीलाई अन्य मानिसहरू र हाम्रो ग्रहलाई दयालु र दयालु नभएको तरिकामा व्यवहार गर्न नेतृत्व गर्दछ।
Better World Edको वास्तविक जीवन मानव कथाहरूले हामीलाई यी गाँठहरू खोल्न र समुदायलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी BETTER WORLD ED कार्यहरु
हरेक राम्रो विश्व कथाले गणित, साक्षरता, समानुभूति, आश्चर्य, विश्वव्यापी जागरूकता, र सांस्कृतिक समझलाई सँगै बुन्दछ।
वर्डस भिडियोहरू विश्वभरि अद्वितीय मानिसहरुको बारेमा। सिकाउनुहोस् र सिक्नुहोस् न्याय गर्नु अघि जिज्ञासा हरेक उमेर मा।
जीवनभर आश्चर्य। गहन सम्बन्धित छ।
मानव कथाहरू र प्रश्नहरू हाम्रा नयाँ साथीहरूबाट शब्दहीन भिडियोहरू। समानुभूति, गणित, साक्षरता र सम्बन्धित बुन्नुहोस्।
अर्थपूर्ण बुझाइ। राम्रो संसार कथाहरू।
राम्रो विश्व पाठ योजनाहरू प्रासंगिक शिक्षाविद्हरूका साथ भिडियोहरू र कथाहरू बुन्नुहोस्। गतिविधिहरू, कला, आन्दोलन, खेल र अधिक।
दयालु कुराकानी। रचनात्मक सहयोग।
हाम्रो चेतना, जिज्ञासा, समानुभूति र करुणा बढाउन मद्दत गर्नका लागि अझ राम्रो विश्व कथाहरू।
रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, सहयोग, र जडान।
जीवनको लागि। प्रारम्भिक बचपन, K-12 र वयस्कहरू।
जीवनको लागि शिक्षालाई माया गर्नका लागि उत्तम विश्व कथाहरू
विविध दृष्टिकोण खोज्न। चुनौती धारणा। पूर्वाग्रह सामना निर्णय निलम्बन गर्नुहोस्। प्रश्नहरू मनाउनुहोस्।
पूर्ण हाम्रो भावनालाई अँगाल्नको लागि।
हाम्रो जटिल, सुन्दर भिन्नताहरूमा रमाउन।
एक अर्कालाई हेर्न। एक अर्कालाई बुझ्न
कक्षामा मानवता ल्याउन। हाम्रो होमस्कुलिङ मा।
शिक्षामा मानवता ल्याउने ।
विश्वव्यापी र भित्री विसर्जन को बारे मा प्रेम को लागी selएफ, अरुहरु र हाम्रो विश्व
लाई माया गर्न सिक self, अरूहरू, र हाम्रो संसार। राम्रो संसारको लागि।
राम्रो संसारमा मानवीकरण सिकाइ
Better world edहाम्रो साझा मानवताको लागि शिक्षा।
हाम्रो हृदय, दिमाग, शरीर र आत्माको लागि।
उपचार, एकता, र को लागी उबुन्टुसँग बस्दै.
उद्देश्य अर्थ। सम्मान। सम्बन्धित छ।
BETTER WORLD ED मानवता पुनरुत्थान गर्न भिडियोहरू
हाम्रो भित्र र बिचको गाँठोलाई बेवास्ता गर्दै सचेत मानव बन्ने विश्वव्यापी कथाहरू। समुदायको फेब्रिकलाई पुन: बुनेको लागि।
शिक्षामा मानवतालाई पुनर्जीवित गर्नका लागि उत्तम विश्व कथाहरू।
राम्रो विश्व कथाहरू पहुँच गर्नुहोस्
राम्रो संसारको लागि शब्दविहीन भिडियोहरू र कथाहरूमा प्रतिबिम्बित शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस्
राम्रो संसारको लागि शिक्षामा मानवता ल्याऔं।
कक्षा कोठा र घरेलु सिकाइमा समानुभूति बुनौं।
हाम्रो साझा मानवता हेरौं।
राम्रो संसारको लागि, हामीले गर्नुपर्छ।
हामी मध्ये धेरै धेरै बुझी अभ्यास गर्न समर्थन बिना हुर्केका छौं।
विविध व्यक्ति, संस्कृति, भावना, दिमाग, दृष्टिकोण र जीवनको तरीका बुझ्दै।
हाम्रो साझा मानवता बुझ्दै।
निर्णय अघि र बाहिर जिज्ञासा अभ्यास गर्न समर्थन बिना।
समर्थन बिना गहिरो अर्थमा।
यसको सट्टा, हामीलाई भनियो कि हामी धेरै संवेदनशील छौं।
हामी मध्ये धेरै धेरै जीवनको लागि शिक्षा सिक्न समर्थन बिना हुर्केका छौं।
जीवनमा प्रेम गर्न सिक्न।
राम्रो संसार निर्माण गर्न।
धेरै धेरै निर्देशन।
पर्याप्त गाईडिंग छैन।
"जान्नु" मा धेरै तनाव।
प्रश्नहरूको लागि पर्याप्त प्रेम छैन।
धेरै धेरै हल गर्दै।
पर्याप्त सुन्न छैन।
पर्याप्त समानुभूति छैन।
धेरै "भावनाहरू नदेखाउनुहोस्"।
पर्याप्त अंगाल्ने भावनाहरू छैन।
धेरै "बलियो बन्नुहोस्"।
पर्याप्त उपचार छैन।
धेरै नै "तपाइँ सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न"।
पर्याप्त छैन "हामी केही परिवर्तन गर्न सक्दछौं"।
धेरै धेरै वास्तविक संसार।
पर्याप्त राम्रो संसार छैन।
धेरै धेरै मंथन
पर्याप्त हृदयविदारक छैन।
हामीलाई हाम्रो हृदयको लागि शिक्षा चाहिन्छ। राम्रो संसारको लागि।
हाम्रो समानुभूति र जिज्ञासा मांसपेशिहरू निर्माण बिना, एक अर्कालाई अद्वितीय, सम्पूर्ण, सुन्दर मानवको रूपमा हेर्ने हाम्रो क्षमता जटिल हुन जान्छ।
यसले हाम्रो छातीमा गाँठो पार्छ, बदमाशी, पूर्वाग्रह र पूर्वाग्रह।
फैसला भेदभाव। Dehumanization। संघर्ष
हाम्रो हृदय र दिमागमा हिंसा र युद्ध।
हाम्रो विचार, शब्द, र कार्यहरूमा।
बुद्धिमत्ता र नयाँ विचारहरूको साथ हाम्रो विश्वको चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न को लागी राम्रो लाग्न सक्छ, तर मात्र लामो को लागी।
हामी हाम्रो सबै खाना र हाम्रो सबै कोषहरू पुनः वितरण गर्न नयापन गर्न सक्दछौं, तर यो कहिलेसम्म रहनेछ र यसले शान्ति ल्याउनेछ यदि हामी अझै पनि पक्षपात, न्याय, पूर्वाग्रह, अज्ञान, वा हाम्रो हृदयमा गहिरो घृणा गर्छ भने। दिमाग?
यसैले हामी मध्ये प्रत्येक,2वर्ष र माथिका लागि राम्रो विश्व कथाहरू आवश्यक छ:
जीवनभरको बारेमा जान्नको लागि प्रेम गर्न selएफ, अरुहरु र हाम्रो विश्व
प्रेम गर्न सिक्न self, अरूहरू, र राम्रो संसार।
लाई हाम्रो बुझ्नुहोस्selभेस र एक अर्का हाम्रो सबै जटिल र सुन्दर साझा मानवता मार्फत।
द्वन्द्व समाधान गर्न सिक्न। हाम्रो संग शान्ति हुनselभेस र अन्य।
निर्णय निलम्बन गर्न र एक अर्कालाई अवलोकन गर्न। मानवीय गर्न। To माफी माग। सँगै निको पार्न।
प्रामाणिक मानव कथाहरू र ठूला जीवन प्रश्नहरू मार्फत राम्रो संसार सिर्जना गरौं।
प्रारम्भिक जीवन, हरेक दिन, र सबै ठाउँमा।
गरौं बुनाई हाम्रो समुदायहरूको कपडा।
अझ राम्रो संसारको पुनरुत्थान गरौं।
टाउको देखि मुटु मा सार्न गरौं।
सामेल Better World Edआज शिक्षा।
युवाहरूको लागि राम्रो विश्व प्रश्न:
यदि हामी सबै राम्रो संसारको लागि शब्दहीन भिडियो र कथाहरू सिकेको जब हामी २ बर्षको थियौं, हाम्रो विश्व चुनौतीहरु को कुनै छ पनि अवस्थित छ?
हामी युवाहरूको लागि शब्दहीन भिडियो र मानव कथाहरू सिर्जना गर्छौं
जीवनभरको बारेमा सिक्नको लागि selएफ, अरुहरु र हाम्रो विश्व
Better World Ed एक 501(c)(3) गैर नाफा ("Reweave, Inc") हो।
साइन अप, प्रायोजक शिक्षकहरू, र दान मानवता पुनरुत्थान गर्न।
हामी किन अवस्थित छ र हाम्रो प्रभाव
एउटा सदस्यता दान गर्नुहोस्
राम्रो विश्व सामान
नयाँ कथाहरू समर्थन गर्नुहोस्
FAQs र मद्दत कागजातहरू
हाम्रो टोलीलाई होस्ट गर्नुहोस् (PD र थप)
© प्रतिलिपि अधिकार 2022 Better World Ed (रिवेभ, इन्क।) | सिकाइलाई मानवीकरण गरौं
समुदायलाई रिवाईभ गरौं | हामी गरौं
Xहामी तपाइँको प्राथमिकता सम्झना र तपाइँको भ्रमण दोहोर्याएर सबै भन्दा सान्दर्भिक अनुभव दिनको लागि हाम्रो वेबसाइटमा कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। "स्वीकार" क्लिक गरेर, तपाईं सबै कुकीजको प्रयोगमा सहमत हुनुहुन्छ। के छैन selमेरो व्यक्तिगत जानकारी. थप पढ्नुहोस्स्वीकारबाहिरिनुसेटिङ
__stripe_mid 1 वर्ष स्ट्राइपले भुक्तानहरू प्रशोधन गर्न यो कुकी कुकी सेट गर्दछ।
__stripe_sid 30 मिनेट स्ट्राइपले भुक्तानहरू प्रशोधन गर्न यो कुकी कुकी सेट गर्दछ।
JSESSIONID सत्र JSESSIONID कुकी नयाँ Relic द्वारा सत्र पहिचानकर्ता भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ ताकि नयाँ Relic ले एउटा अनुप्रयोगको लागि सत्र गणनाहरू निगरानी गर्न सक्छ।
laravel_ सत्र 30 मिनेट laravel ले प्रयोगकर्ताको लागि सत्र उदाहरण पहिचान गर्न laravel_session प्रयोग गर्दछ, यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ
ts3वर्ष PayPal ले PayPal मार्फत सुरक्षित लेनदेन सक्षम गर्न यो कुकी सेट गर्दछ।
ts_c3वर्ष PayPal ले PayPal मार्फत सुरक्षित भुक्तानी गर्न यो कुकी सेट गर्छ।
हेरिएको_कुकी_पलिसी 1 वर्ष कुकी GDPR कुकी सहमति प्लगइन द्वारा सेट गरीएको छ कि प्रयोगकर्ता कुकीहरु को उपयोग को लागी सहमत छ वा छैन। यो कुनै पनी व्यक्तिगत डाटा भण्डारण गर्दैन।
XSRF- टोकन 30 मिनेट यो कुकी Wix द्वारा सेट गरिएको हो र सुरक्षा उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ।
givebutter_session2घण्टा कुनै वर्णन छैन
wp_woocommerce_session_eadf5e9ac70b75cf60bdd37a0be905522दिन कुनै वर्णन छैन
NID6महिना NID कुकी, Google द्वारा सेट, विज्ञापन उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ; प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेको संख्यालाई सीमित गर्न, अनावश्यक विज्ञापनहरू म्यूट गर्न र विज्ञापनहरूको प्रभावकारिता नाप्न।
_ga2वर्ष _Ga कुकी, गुगल एनालिटिक्स द्वारा स्थापित, आगन्तुक, सत्र र अभियान डाटा गणना र साइट को विश्लेषण रिपोर्ट को लागी साइट को उपयोग को ट्रयाक राख्छ। कुकी गुमनाम जानकारी भण्डारण र एक अनियमित उत्पन्न संख्या प्रदान गर्दछ अद्वितीय आगन्तुकहरु लाई पहिचान गर्न को लागी।
_gat_gtag_U YouTube50467616_2 1 मिनेट प्रयोगकर्ताहरू छुट्याउन Google द्वारा सेट गरिएको।
_gid 1 दिन गूगल एनालिटिक्स द्वारा स्थापित, _gid कुकी कसरी आगन्तुकहरु एक वेबसाइट को उपयोग को बारे मा जानकारी को भण्डारण, जबकि वेबसाइट को प्रदर्शन को एक विश्लेषण रिपोर्ट बनाउन। स collected्कलन गरिएका केही डाटाहरुमा आगन्तुकहरुको संख्या, उनीहरुको स्रोत, र उनीहरु गुमनाम पानाहरु पानाहरु सामेल छन्।
ध्यान दिनुहोस्2वर्ष YouTube ले यो कुकीलाई एम्बेडेड YouTube-भिडियोहरू मार्फत सेट गर्छ र बेनामी तथ्याङ्कीय डेटा दर्ता गर्छ।
vuid2वर्ष Vimeo ले यो कुकीलाई वेबसाइटमा भिडियोहरू इम्बेड गर्नको लागि एक अद्वितीय आईडी सेट गरेर ट्र्याकिङ जानकारी सङ्कलन गर्न स्थापना गर्दछ।
__cf_bm 30 मिनेट Cloudflare द्वारा सेट गरिएको यो कुकी Cloudflare Bot Management लाई समर्थन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
__utma2वर्ष यो कुकी गुगल एनालिटिक्स द्वारा सेट गरिएको छ र प्रयोगकर्ता र सत्रहरू छुट्याउन प्रयोग गरिन्छ। कुकी सिर्जना हुन्छ जब जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी कार्यान्वयन हुन्छ र त्यहाँ अवस्थित __utma कुकीज छैन। कुकी प्रत्येक चोटि डाटा Google एनालिटिक्समा पठाइन्छ।
__utmc सत्र कुकी गुगल एनालिटिक्स द्वारा सेट गरिएको छ र प्रयोगकर्ताले ब्राउजर बन्द गर्दा मेटाइन्छ। यो urchin.js को साथ अन्तरक्रियाशीलता सक्षम गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन Google Analytics को पुरानो संस्करण हो र नयाँ सत्र/भिजिटहरू निर्धारण गर्न __utmb कुकीसँग संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ।
__utmt 10 मिनेट गुगल एनालिटिक्सले यो कुकीलाई अनुरोध दर रोक्नको लागि सेट गर्दछ।
__utmv2वर्ष __utmv कुकी प्रयोगकर्ताको यन्त्रमा सेट गरिएको छ, Google Analytics लाई आगन्तुक वर्गीकरण गर्न सक्षम गर्न।
__utmz6महिना गुगल एनालिटिक्सले यो कुकीलाई ट्राफिक स्रोत वा अभियान भण्डारण गर्न सेट गर्दछ जसद्वारा आगन्तुक साइटमा पुग्यो।
_gat2घण्टा यो कुकी गुगल युनिभर्सल एनालिटिक्स द्वारा अनुरोध दर को रोकथाम र यस प्रकार उच्च यातायात साइटहरु मा डाटा को संग्रह सीमित गर्न को लागी स्थापित छ।
बचत गर्नुहोस् र स्वीकार्नुहोस्